Mgbe Damana gasịrị, Damaskọs, ha kwuru na ọ dịghị onye kwesịrị ịkwado bọmbụ ndị na-eyi ọha egwu na Syria. Ọnọdụ Russia agbanwebeghị. Ọ na-emegide mmegide agha. O kwetara ịkọzi usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ASSED. Mmegide na mpaghara Assad, ndị mmegide na United States na West na-emegide mmezi ọ bụla na Mr Afrad n'onwe ya.
Na nsogbu na ụlọ ọrụ teknụzụ, ndị egwuregwu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka teknụzụ nwere nnukwu ụlọ ọrụ na-achọ ka ha guzosie ike na Australia ruru $ 10. 5 ijeri (banyere na United States. $ 8 ijeri)
Ha dịkwa mma maka itinye akpa aka ma ọ bụ akpa na ịka nká. Dị ka onye ọ bụla ọzọ na ndepụta ahụ, ha nwere akpa anọ nke enwere ike kesaa n'etiti ọtụtụ ụgbọ ala ma ọ bụ ọtụtụ akpa. Ozugbo nkwakọ ngwaahịa ahụ mepere emepe, anyị anaghị atụ aro ịchekwa ha kwa ọnwa iji dochie. Flosasies na echiche ya mara mma maka ndị ọkwọ ụgbọala na-achọ ihe ọ bụla na-achọ.